Iyo nyowani yeApple Watch chiitiko chinonetsa kune maChinese | Ndinobva mac
Iyo nyowani yeApple Watch chiitiko chinonetsa kune maChina
Iwe unofanirwa kutsanangura zita racho mushe. Kwete kuti Apple ikozvino inotanga kusarura vashandisi vayo nerudzi, kure nazvo. Ingori kuti Nyamavhuvhu 8 izuva reFitness Fitness mu China, uye Apple inoda kuipemberera nedambudziko rakakosha kune vese avo vashandisi veApple Watch vanogara munyika ino.
Isu tatoziva kuti Apple inotsvaga chero chikonzero chekugadzira zviitiko zvekuita. Nzira inonakidza yekukurudzira vashandisi veApple Watch kuti vashandise. Iye nguva nenguva anotangisa zvidiki zvidiki zvine chekuita nekudzidziswa, uye kana iwe ukazviita, iwe unokunda dijitari "mabheji" aunogona kugovana neshamwari dzako. Inotevera yakatsaurirwa kuvatambi veChinese.
China inopemberera gore rega Zuva reNational Fitness kubvira maOlimpiki eBeijing muna 2008. Kwegore rechitatu rakateedzana, Apple inopemberera chiitiko ichi neApple Watch Activity Dambudziko. Iyi kesi isingawanzoitika apo matambudziko ezviitiko akakiyiwa geo. Iwe unongokwanisa kuwana iri dambudziko kana iwe uchigara kuChina.
Iri dambudziko rakakosha uye rakasarudzika rinongowanikwa chete pa August 8. VaChinese vanogara Apple Watch vashandisi vachakwanisa kuvhura yakasarudzika chiitiko mubairo nekupedzisa ingangoita 30 maminetsi ekurovedza muviri
Apple ichapa mubairo vashandisi vanoipedzisa nemabheji akasarudzika muIchiitiko app, pamwe neanopachika matikiki ekushandisa muMessage uye FaceTime. Iko kubudirira kunogona kuwanikwa nekunyora chero kudzidziswa kwe 30 maminitsi kana zvimwe, kubva kune chero application inorekodha data kuApple Health.
Apple inowanzo kuvhura aya marudzi ezvinetso kazhinji kukurudzira vashandisi veApple Watch kuti vapedze nenzira inonakidza. Ivo anowanzo ari madiki ejimkhanas emabasa ekurovedza muviri. Ukapedza zvindori izvo, unowana mibairo muchimiro che madhijitari mabheji uye zvitambi saka unogona kuratidza shamwari dzako kuti waita dambudziko. Asi hazviwanzo kuitika kukambani kuvhura dambudziko rakaganhurirwa kune imwe nzvimbo yepasi, senge mune ino kesi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo nyowani yeApple Watch chiitiko chinonetsa kune maChina
usawane chiremwaremwa mangwanani pakudya kwemangwanani.
Nyasha Kaufman kutamba nyeredzi mudenga iri Kwese kwese bhaisikopo reApple TV +